Wasiirka kaalmada dibedda ee Iswiidhen oo booqaneysa Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda Iswiidhen u qaabbilsan kaalmada dibedda Gunilla Carlsson iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo shir-jaraa'id ka hadlaya. Sawirle: Richard Myrenberg/SR
Wasiirka kaalmada dibedda ee Iswiidhen oo booqaneysa Soomaaliya
La daabacay torsdag 5 september 2013 kl 13.58
Wasiiradda kaalmada dibedda Gunilla Carlsson ayaa booqasho ku joogta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxay wasiiradu kulamo halkaas kula yeelatay madaxda sare ee Soomaaliya. Booqashadeedu waxay la xiriirtaa kaalmada ay Iswiidhen siineyso Soomaaliya oo hadda gaareysa nus bilyan karoon.
– Waa wax wanaagsan in aan yeelanno xiriir joogto oo aan u kuurgalno waxtarka kaalmada aan u fidinno. Hadda waxaa weli muuqata in xaaladda amnigu xoogaa cakiran tahay, laakiin waxaa jira dadaalo lagu xallinayo dhibaatada oo ka socda Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya. Aad ayaanna ugu rajo weynahay in xaaladda Soomaaliya ay soo wanaagsanaan doonto mustaqbalka.
Iswiidhen waxay Soomaaliya ugu deeqday kaalmo gaareysa hal bilyan iyo bar karoon oo la doonayo in waqti dheer lagu maalgeliyo Soomaaliya. Waxqabadyada lagu maalgelinayana waxaa ka mid ah dhisidda hay’adaha dowliga ah iyo hawlgelinta dhallaanka iyo dumarka. Waxaa intaas dheer sidii soomalida Iswiidhen ku nool loogu xiri lahaa dalkooda hooyo.
Mar ay Gunilla Carlsson ka hadleysey ahmiyadda kaalmadaan waxay tiri:
– Waxaa qabaa in habka cusub oo aan kaalmooyinka u bixiyo uu yahay mid loogu talagalay meelo dhibaatooyin adagi ka jiraan. Sidaas awgeed waxaan ku khasbanahay in tixgelin siinno dhibaatooyinkaas. Kaalmada aan bixinno waa mid isbeddel keeneysa. Waana muhiim in dhaqso loo gaarsiiyo si loo bilaabo dib-u-dhis, loona helo xasillooni.
16ka bishaan Sebteember waxaa magaalada Bruxells lagu qaban doonaa shir looga hadli doono aayaha Soomaaliya. Shirkaas oo loogu magacdaray ”bilowga cusub” oo ku saabsan waxqabad saddex sano ah.